QM oo loo diray tallo cajiib ah oo ku aadan gaadiidka ay isticmaalan ciidamada AMISOM - Hablaha Media Network
QM oo loo diray tallo cajiib ah oo ku aadan gaadiidka ay isticmaalan ciidamada AMISOM
HMN:- Dowlada Ugandha ayaa shaaca ka qaaday inay dhaliilsan tahay Gaadiidka dagaal oo ay adeegsadaan ciidamada AMISOM ee ka howlgala Somalia.
Dowladu waxa ay sheegtay in gaadiidkaasi ay yihiin kuwo aan tayo laheyn isla markaana u adkeysan karin Qaraxyada iyo hubka culus.
Afhayeenka Ciidamada Uganda Richard Karemir, oo la hadlay saxaafada maxaliga Ugandha ayaa sheegay in dowladiisa ay dacwadaas u gudbisay Qaramada Midoobay.
Richard Karemir, waxa uu sheegay in dowlada Ugandha ay aaminsan tahay in gaadiidkaas ay yihiin kuwa u sababta ah geerida boqolaal askari oo ka tirsan ciidamada AMISOM ee ka howlgala Gobolada Somalia.
Richard Karemir, ayaa sheegay in AMISOM looga baahan yahay in dib u eegis ay ku sameyso gaadiidka ay adeegsadaan Ciidamada AMISOM oo khasaare badan ka soo gaaray Ciidamada.
Afhayeenka waxa uu intaa ku daray in QM iyo Taliska guud ee Midowga Africa laga doonaayo inay keenaan Gaadiid dagaal oo tayo leh, kaas oo u adkeysan kara Qaraxyada iyo Hubka culus, si loo yareeyo khasaaraha ka dhasha weerarrada Al-shabaab.
”Ciidamadeena Somalia jooga badankooda waxa ay u geeriyoodan Qaraxyo loo dhigay gaadiidkooda, sida ay filayeen kuma noqon gaadiidka waayo waxa ay aaminsanaayen inuu ka difaacayo Qaraxa iyo Hubka balse taa ma dhicin”
Sidoo kale, waxa uu Afhayeenka soo jeediyay in gaadiidka sahayda iyo saanadda Ciidan loo baahan yahay in lagu beddelayo Diyaarado si nabad gelyo ah ku taga goobaha saldhigyada Ciidamada AMISOM ay ku leeyihiin Soomaaliya.
Haddalka Afhayeenka iyo cabashada dowlada Ugandha ayaa kusoo beegmeysa xili weerar Axadii lasoo dhaafay ka dhacay Shabeellaha hoose lagu laayay ciidamo farabadan oo kasoo jeeda dalka Uganda.